गुल्मीका कुन गाउँपालिकामा कति शैक्षिक बजेट? यस्तो छ विवरण – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/गुल्मीका कुन गाउँपालिकामा कति शैक्षिक बजेट? यस्तो छ विवरण
गुल्मीका कुन गाउँपालिकामा कति शैक्षिक बजेट? यस्तो छ विवरण
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ कार्तिक २०, सोमबार २३:२७ मा प्रकाशित
गुल्मी । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सार्वाजानिक गरेको विवरण अनुसार ईस्मा गाउँपालिकाका लागि कुल ८ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ शैक्षिक वजेट परेको छ । त्यस मध्ये ८६ लाख तलव भत्तामा जाने छ । सामुुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालनका लागि २ लाख र एसएसडिपी कार्यक्रमका लागि १ करोड ४० लाख ६६ हजार रहेको छ ।
कालिगण्डकी गाउँपालिका लागि ८ करोड ५६ लाख ६२ हजार कुल रकम परेको छ । हरेक गाउँ गाउँ र नगरपालिकाले सामुदायिक सिकाई केन्द्रका लागि २ लाखका दरले पाएका छन् । ५० करोड भन्दा माथी हरेक गाउँ पालिकाले शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्चिने छन् । सवै भन्दा बढि तलवत्तामा रकम खर्चिने नगरपालिमा परेको छ मुसिकोट । जसले यस चालुक आर्थिक वर्षमा ९ करोड ५९ लाख ६७ हजार तलव भत्तामा खर्च गर्ने छ ।
सदरमुकाममा रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकामा भने तलव भत्तामा जम्मा ५ करोड ७४ लाख ७९ हजार तलव भत्तामा खर्च हुने छ । उक्त रकम माध्यामिक भन्दा तलका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको मात्र हो । माध्यमिक तहका शिक्षक कर्मचारीहरुको तलव सवै भन्दा बढि खुवाउने पनि मुसिकोट नगरपालिका रहेको छ । उसले माध्यामिक तहका शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता २ करोड १८ लाख ६४ हजार खर्च गर्ने छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रका माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता १ करोड ५७ लाख १ हजार रहेको छ । यसबाट रेसुङ्गा नगरपालिमामा सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी श्रोतका विद्यालयको दवदवा बढि छ र जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालयको सवै भन्दा बढि पहुँच मुसिकोट नगरपालिकामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । माध्यमिक तहका विद्यालयहरुको सवै भन्दा कम पहुँच ईस्मा गाउँपालिकामा छ भन्ने तलव भत्ताको विवरणले देखाएको छ ।
गाउँपालिका मध्ये माध्यमिक तहका शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता सवै भन्दा कम ईस्मा गाउँपालिकाले ८६ लाख १० हजार रहेको छ भने अरु गाउँपालिका १ करोड देखि डेढ करोड सम्म खुवाउने भएका छन् । गाउँ पालिकाहरु मध्ये माध्यामिक तहको बढि पहुँच भएको धुर्कोट गाउँपालिका देखा परेको छ । उसलाई परेको उसलाई यस आर्थिक वर्षमा परेको कुल ९ करोड १७ लाख ७४ हजार शैक्षिक वजेट मध्ये माध्यामिक तहका शिक्षक कमेचारीहरुलाई सो गाउँपालिकाले सवै भन्दा बढि १ करोड ७८ लाख ८ हजार तलव भत्ता खुउँदै छ ।
दोश्रो ठुलो सत्यवती गाउँपालिका देखिएको छ । उसलाई यस आर्थिक वर्षमा परेको कुल ९ करोड ३२ लाख ४४ हजार शैक्षिक वजेट मध्ये माध्यामिक तहका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उसलेले १ करोड ७१ लख ४३ हजार रुपैयाँ तलव भत्ता खुवाउने भएको छ । माध्यामिक तहको शिक्षक , कर्मचारीको तेश्रो ठुलो गाउँपालिका कालिगण्डकी देखा परेको छ । यस आर्थिक वर्षमा उसलाई कुल शैक्षिक वजेट ७ करोड ७० लाख ७६ हजार मध्ये माध्यामिक तहका शिक्षक कर्मचारीका लागि मात्र १ करोड ६५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्चिने छ ।
माध्यामिक तहको शैक्षिक पहुँचको चौथो तहमा रहेको रुरु गाउँपालिका । उसलाई परेको कुल ८ करोड ७६ लाख २९ हजार मध्ये माध्यामिक तह शिक्षक कर्मचारीका लागि १ करोड खुवाउँदै छ । अन्य गाउँपालिकाले कुल रकम करिव त्यति नै छ र रुरु गाउँपालिका भन्दा केहि कम माध्यामिक तहका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलव भत्ता खुवाउँदै छन् ।